Wadada Suuqgeynta Casriga ah | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 6, 2012 Douglas Karr
Waan jeclahay suuqgeynta iyo wax kasta oo ay mataleyso. Fikradayda, suuqgeyntu waa mid gaar ah maxaa yeelay waxay isu keentaa dhowr hibo iyo arrimo:
Dabeecadda dadka - saadaalinta habdhaqanka aadanaha iyo fahamka waxa ay doonayaan iyo baahiyaha dhaqaajiya dhaqankaas.
Hal-abuurka - la imaanshaha fikrado hal-abuur leh oo fudud oo qurux badan, ka hadlaya qadarinta dadka ee qurxinta.
Falanqaynta - falanqaynta dib-u-eegista xogta si loo helo fursado horumarineed iyo jawaab celin kordhay.
Technology - adeegsiga tikniyoolajiyada si loo cabiro, loo hagaajiyo loona otomaatig geliyo dadaalada suuq geynta.
Waxaan gaarnay Da 'Dahab ah oo suuqgeyn ah halkaasoo farshaxanka iyo sayniska ay ka helayaan isku dheelitirnaan dhammaystiran. Awoodda wax lagu cabiro waxaa lagu buuxiyaa awoodda lagu falanqeyn karo waxa mitirku ula jeedo. Xogtuna ma aha oo kaliya inay waddo go'aanno wanaagsan, laakiin sidoo kale waxay u sii deyneysaa suuqleyda inay noqdaan kuwo geesinimo leh, tijaabiya, inay sahamiyaan geesaha wadiiqooyinka caanka ah oo ay ku dhiiradaan kuwa cusub. Laga soo bilaabo Eloqua's Infographic, Wadada Suuqgeynta Casriga ah
Sideebaan u helnay halkan?
Tags: taariikhdataariikhdamarketingtaariikhda suuq geyntasuuqgeyn casri ah